Firefox 84 inogonesa WebReder nekukasira paLinux! Asi ... | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 84 inogonesa WebReder nekukasira paLinux! Asi ... ini ndaizoramba ndisina chokwadi
Firefox 67 Yakauya neyakajairika yakamira kubva kune vamwe vese: yaive yekutanga kumisikidza WebRender, injini nyowani yekupa iyo yakavimbisa kusimudzira mashandiro ese ebrowser. Hapana kana pasi pegore nehafu yapfuura kubva ipapo, uye vashandisi veLinux vachiri kumirira kuitiswa kwayo nekutadza. Zvakanaka ipapo: kubva pane izvo zvinoita senge ichave iri Firefox 84 kana tisingachafanirwe kuishandisa nemaoko, sezvatatsanangura muzuva rayo mu ichi chinyorwa.
Asi ngatigare takadzikama. Chekutanga pane zvese, Mozilla inoyambira kuti mumashanduro ekutanga mabasa anogona kuoneka asinga svike pane yakagadzika vhezheni, uye semuenzaniso tinazvo kuti aya, angangoita ehusiku, ane maitiro echizvarwa ekugadzirisa matabhu mumidziyo isina kusvika iyo yakagadzikana vhezheni (uye ini handitombozvitarisira). Kune rimwe divi, Mozilla ichaita zvakare WebRender paLinux zvishoma nezvishoma, kutanga neavo vanoshandisa X11 protocol.
WebRender iri kuuya kuLinux / X11 muFirefox 84
Pakutanga, Mozilla yanga ichinonoka kusvika kweWebRender kuLinux nekuda kwematambudziko ekugadzikana, kunyanya muvashandisi veWayland. Nechikonzero ichocho, vachatanga neve X11, asi zvinotaridzika senge zvichaita kune vashandisi veGNOME.
Naizvozvo, isu tichiri kuzofanirwa kuramba tichishivirira. Ichokwadi kuti GNOME inzvimbo yakapararira yekushambadzira iyo masisitimu akadai seFedora neUbuntu anoshandisa senzira huru, asi ichokwadiwo kuti vazhinji vedu vanosarudza Plasma kana chimwe chinhu chakareruka senge Xface, saka haizonaya kune wese munhu waanofarira kubva mavambo. Zvinotendwa kuti zvinofanirwa kushanda zvakaringana munzvimbo dzemifananidzo, asi Mozilla inoda kungwarira.
Vashandisi vanofarira vanogona kuyedza Firefox 84 (Beta) nekukodha mabhinari kubva Iyi link. Pane kumwe kugoverwa kweLinux, senge Arch kana Manjaro, vanogona kuisanganisa nekuiisa kubva kuAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 84 inogonesa WebReder nekukasira paLinux! Asi ... ini ndaizoramba ndisina chokwadi
Chinondinetsa iko kuenderana neyakare Hardware, parizvino WebRender kuumbwa kunogoneka chete pane inoenderana Hardware kutanga kubva OpenGL 3.0 (kana ini ndichirangarira nemazvo), saka izvo izvo zvisingaendere mberi kushanda neOpenGL uye pasina chero fomu reiyo WebRender inogoneswa nekuti nekutadza zvinoda kuti Hardware ikwanise kupa WebGL 2. Ndinovimba kuti iyi injini nyowani ichakwanisa kupa mune ramangwana kunyangwe iyo komputa kwairi kumhanya isingaenderane neWebGL 2.
Librem Mini v2, inogadziridza kuPurism mini PC inowanikwa kubva kutanga kwemwedzi
Chrome 87 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwekuita isu tese taitarisira